Jimmaa:”Fira fakkaateet risaan sinbira fixxe jedhan. “Sa’aa Abbaan gaafa cabse” hin jedhu. – Kichuu
HomeNewsAfricaJimmaa:”Fira fakkaateet risaan sinbira fixxe jedhan. “Sa’aa Abbaan gaafa cabse” hin jedhu.
Jimmaa:”Fira fakkaateet risaan sinbira fixxe jedhan. “Sa’aa Abbaan gaafa cabse” hin jedhu.
Jimmaa “Fira fakkaateet risaan sinbira fixxe jedhan.
“Sa’aa Abbaan gaafa cabse” hin jedhu. Maaf yoo jeettan dhimman kaasnu kanaaf namni kuni abbaa ta’u hin danda’u. Goochi isaa marti kanaaf ragaa dha.
“Bara tokko Dr. Mulaatu (pireezidaanti duri) biyya itti dhalate Arjoo dhaqeeti ummata Arjoo ti Amaarifaan haasa’e turjumaanan ummatatti himamaa ture. Hawaasa magaala Naqamtee (miseensoota OPDO) walin yoo mari’atuus akkasuma godhe. Namni kuni dhigan ille Oromoo ta’u baatu, Wallagatti (sanu baadiyaa) dhalatee fi guddate Afaan Oromoo hin walaalu. Garu isaaniif dhiphaa akka hin jedhamne afaan alagaan haasa’uun akka ulaagaa ture.
Haaluma walfakkaatuun MM (Abiiy A.) dhengada gaafa gara Jimmaa bu’e (ummata Limmuuf) hasaan inni godhe afaan alagaan ture. Namni walqixummaa afaanifan qabsaa’a, afaan Oromoo afaan mootummaa feedraalan godha jedhe haasa’u tokko ummata Afaan Oromoo beeku bira dhaqee, afaan alagaan haasa’uun isaa eenyummaa nama kana, jibba inni saba kanaaf Afaan Oromoo inni qabu caalmaa ifa godha. Mee gaafa badhaasa Noobeeli deebi’u kan Niguusuun itti hime Chaanaalii jijjirri naan jedhe jedhe osoo ajabnu. Mee ilaala biyya alaa dhaqee warra afaan Ingilifaa Danda’utti Amaariffaan namni hasaa godhu, Oromiyaa keessatti Afaan Oromoo haasa’uu maaf xirreeffata?
“Kuni ifaa aantummaa isaa gita bitootaaf (Amaaraf) qabu calaqisisaa. Hunda caala waan Oromoon akka sabaatti jaalatu mara jibbuun sabboonummaa Oromoon laafisa jedhe yaada. Yaa sabaa waan dhufaa jiru xinxali, waan hundaaf of qopheessi.
ኢዜማ : ብሔሮችን የማይቀበል፣ የወል መብቶቻቸውን የማያከብር ፖለቲካ፣ የአገር አንድነት ማስከበሪያ ፖለቲካ ሳይሆን፣ የጠቅላይ-ተስፋፊነት (imperial) ፖለቲካ ነው!